Onye Nduzi Amalite na Oracle Database Certification | Ọ BỤ
Onye Nduzi Na-eduzi Na Nduzi na Nweta Ihe Ntuba Oru
1.Database Development Ngwa:
Otu n'ime ndị isi ụlọọrụ IT na mbara ala, Oracle nwere ihe karịrị 300 certifications iji nye. Ihe ọmụmụ ndị a sitere na nchịkọta 9 dị iche iche na-ekpuchi ihe ọmụma ndị gụnyere gụnyere databasesị, mmepụta ihe, ngwa, imekorita, nchịkwa ọrụ na ndị ọzọ. Usoro nchịkwa data ntọala lekwasị anya na ngwaahịa, nkebi, ngwaọrụ na ntinye ohuru nke Oracle na-enye ndị ahịa ya niile, ma zube ka ha rụọ ọrụ nwere nkà nke nwere ike iji ọrụ Oracle nweta ikike na nkwụsị.
Usoro nhazi Oracle na nchekwa data nchekwa data na-ekpuchi nzere dị iche iche. Ihe nchịkọta 3 n'ozuzu nke usoro nchịkwa database nke Oracle bụ:
Asambodo ndị a na-enye ndị ọkachamara IT ọkachamara n'iji iziga ngwa ngwa Oracle. Asambodo yiri ya na mpaghara a gụnyere:
● SQL na PL / SQL: dịka ịchọta asụsụ nke mmemme SQL.
● Oracle Application Express ma ọ bụ Oracle APEX: na-enye gị ohere iji kwado usoro ndokwa onwe onye na imeziwanye ihe maka usoro ihe omume ndị ahụ, ngwa ngwa na-agbanwe ma na-enwe ike ịme ihe.
Ngalaba nchịkwa Oracle na-enye ndị nkuzi ndị na-enyere gị aka ịmatakwu banyere ihe ndị dị mkpa n'uche na-egosipụta na asụsụ SQL na increment gị amaliteghachi. Ihe ngosi 2 ebe a bụ:
● My SQL database administration: na-enye aptitudes mara na ngwugwu nke nchekwa data na ngwa dị iche iche mara na ya.
● Onye Mmepụta SQL m: ihe a rụzuru ebe a bụ maka ọganihu nke usoro nyocha na usoro azịza na ajụjụ na ị nwere ike ime ka akụkọ ndị dị nfe maka ndị ahịa ikpeazụ.
Ama databases na-ewu ewu gburugburu ụwa. Asambodo ndị a na - eme ka ị bụrụ ọkachamara na ilekọta ọdụ data. Ejiri ihe ngosi 4 puru iche na mpaghara nka. Ndị a gụnyere:
● Database 12c Oracle: asambodo a nyere ndị DBA (ndị nchịkwa data nchịkwa) aptitudes ndị dị oké mkpa ma chọọ ka ha na-elekọta data data Oracle kwa ụbọchị. Ọ na-agbakwa ha ume ka ha nhazi, welie ma kpochapụ ụdị nkwalite na nkwado. Ndị ọkachamara nwere ike ijikọta arụmọrụ site n'iji ọtụtụ ọdụ data dị iche iche na pluggable.
● Oracle Database 11g: akwukwo ahụ na-enye ikike iji nweta ọgwụgwọ nke ọma na nchekwa nke nchekwa Oracle, 11g, nke a pụrụ iji ya rụọ ọrụ dịgasị iche iche.
● Chukwu igwe ojii: nke a bụ asambodo a kapịrị ọnụ nke a kọwara na nchịkwa nke data data Oracle.
● Nzukọ Ọhụụ 11g: akwukwọ ahụ na-enye ntụziaka na aptitudes maka nyocha, ntinye na nchịkwa nke data gbasara ohere. N'oge a, ihe karịrị 80% nke ozi nke ụlọ ahịa na-enweta nwere ike ịnyefe ozi gbasara ohere.
A na-enye ikikere nke Oracle na ọkwa dịgasị iche, Njikọ bụ ihe dị mkpa. Ndị ọzọ na nnukwu ibu bụ Master Master, ọkachamara na ọkachamara ọkwa. Ikwesiri ịmalite site na ọkwa dị ala. Asambodo ndị dị elu ga-enyere gị aka imelite ngwa gị, ọ ga-egosikwa gị ikike ndị ọzọ dị ịrịba ama, mmụta na ịkwụ ụgwọ.
I nwere ike isonyere Oracle online university na njedebe nke akwụkwọ ntinye akwụkwọ nchekwa data, ebe ọ bụ na e nwere ndị ọzọ mebere institutes na tie na Oracle na-ekwenye na-enye gị nchekwa data na ụdị dị iche iche nke Ndebanye aha Oracle kwa. Onye nkuzi ahụ na-enye ntụziaka nkuzi ga-ekwenye na ị ga-enweta ihe mmụta na ikike niile ị ga-emecha na-eduzi asambodo ngwa ngwa na n'oge. Ihe ihe omuma bu ihe ndi ozo bu ndi kwesiri inweta ya ma kwesiri imata ha ka ha zaajujujujujujujujujujuojuo mgbe i biara na otutu uzo ajuju nyocha akwukwo Oracle database.
N'ịkwado ụdị akwụkwọ ntinye data nchekwa data ị nwere, ị ga-enwe ihe ọmụma dị mkpa maka nchịkwa nke data data Oracle. Na Databases enwere ike iji ya na obere, center na agadi ogo. Asambodo na nzere ga-anakwere njirimara na ozi gị na-ekwupụta na kachasị mma maka ịzụlite ọrụ mgbe ị nwechara aka na ezi ahụmahụ, kwa. Asambodo ahụ ga enyere ndị ụlọ ọrụ aka na-aghọta mgbalị gị ma mee ka ị debe ngwa ngwa.
Ohere Ohere na Uru nke Ntuzi Ntuzi Ọdịnihu